Izinqolobane Zomama - Ukubalwa kwe-Kingdom
Tag Archives: umama
IValeria - Kukhona Isikhathi Esincane Esingakwesokunxele
Unami kuphela ngokuphepha.
UValeria - Ungalokothi Ungabaze Ubukhona Bami
Isikhashana nje, ububi buzophela.
UPedro - Ngilalele
Ubuntu bubheke kwalasha omkhulu.
Valeria - Ngisize
Izingqondo zakho azisazuzi ekukhanyeni.
Umphefumulo WaseCalifornia - Nginike Lezi Zimbali
Ngifuna ukuba khona kwami ​​njengomama ngizwe.
Pedro - Fakazela Ubukhona Bami
Ngivela eZulwini ukuzokusiza.
Umphefumulo WaseCalifornia - Kungani Ngisakhala?
Umphefumulo WaseCalifornia - Izinyembezi Zami
Isikhathi sokujeziswa sesifikile.
Umphefumulo WaseCalifornia - Ungabe Usona
Leli yihora lobulungiswa nesihe.
UGisella - Amasosha Ami Wokukhanya